Carolina Jiménez – Directors – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Huntsman: Winter’s War (2016) Unicode IMDb rating 6.2/10 ပဲ လက်ရှိမှာရထားသေးပေမယ့် ပရိတ်သက်တော်တော်များများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ . . . ပါဝင်ထားတဲ့မင်းသားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်ကြီး Thor မင်းသား Chris Hemsworth က Huntsman အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ 2012 ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Snow White and the Huntsman ရဲ့ အဓိက ဇာတ်အိမ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအစောပိုင်းမှာ စုန်းမ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရဗန်နာနဲ့သူ့ညီမဖရယ်ယာတို့နဲ့စတင်ထားပါတယ်။ ရဗန်နာဟာ snowwhite ကားထဲက စုန်းမဖြစ်ပြီး သူ့ညီမရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပါ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့တဲ့ ဖရယ်ယာ တစ်ယောက်သူ့ရဲ့အင်ပါယာကိုစတင်တည်ထောင်မှုကနေ Huntsmanရဲ့ဇာတ်လမ်းပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Snow White ကားမစတင်ခင်ကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့Snow Whiteကားပြီးတော့ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကာလနှစ်ခုကိုပြန်လည်ဆက်စပ်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Credit Review Zawgyi IMDb rating 6.2/10 ပဲ လက္ရွိမွာရထားေသးေပမယ့္ ပရိတ္သက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပါပဲ . . . ပါဝင္ထားတဲ့မင္းသားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဇာတ္လိုက္ႀကီး Thor မင္းသား Chris Hemsworth ...
Dawn of the Planet of the Apes (2014) Unicode Imdb Ratings : 7.6/10 Rotten Tomatoes : 90% Genre: Action, Adventure, Drama Run Time :2hours 10 minutes Dawn of the Planet of the Apes (2014) သည် IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 90% Google User 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Matt Reeves ရိုက်ကူးထား၍ Mark Bomback, Rick Jaffa တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Drama ...
IMDB: 7.6/10 408508 votes